एक बाख्राले गर्यो यस्तो चमत्कार, थाहाँ पाउँदा स्थानीयको उ’ड्यो हो’स् ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । आज सम्म तपाईँले एक बाख्राले कतिसम्म पाठा–पाठी जन्माएको देख्नु वा सुन्नु भएको छ ? सामान्यतयाः एक, दुई, तीनसम्म हामीले देखेका वा सुनेका छौँ । तर एक बाख्राले ५ वटा पाठा जन्मायो भन्दा तपाँईलाईँ विश्वास लाग्छ ? हो यो सत्य घटना हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा यस्तो कुरा बाहिर आएको छ । यहाँ गुर्भाकोट नगरपालिका–९ भालुखोलामा एक बाख्राले ५ वटा पाठा जन्माएको हो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका–९ मा युवराज वलीको घरको बाख्रीले ५ वटा पाठा जन्माएको हो । स्थानीय युवा समाजसेवी वीरेन्द्र वलीका अनुसार उक्त बाख्राले यो भन्दा अगाडीसम्म दुई वटा मात्र पाठा दिने गर्थ्यो तर यसपटक भने ५ वटा पाठा जन्मायो । यो नगरपालिकामा हाल सम्मकै नौलो कुरा हो । बाख्रा उन्नतजातको रहेको पनि वलीले जानकारी दिए ।
तामाको भाँडोमा राखेको पानी पिउदा हुन्छन् यस्ता चमत्कारीक फाईदाहरु ! सबैले जानी राखौं